ခုချိန်မှာတော့ သူတို့ဟာ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေသည်းသည်းလှုပ်အားပေးတာခံရတဲ့ အဆိုတော်တွေဖြစ်နေပါပြီ ။
သို့ပေမယ့် ငယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ ပရိတ်သတ်ရှေ့ မှောက်ရောက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိသူရှားပါတယ် ။
ခုချိန်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေပြီး ငယ်ငယ်တုန်းထဲက ကလေး သရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတာ လူသိနည်းတဲ့ Male Idol ၅ ယောက်တောင် ရှိနေပါတယ် ။
သူတို့တွေက ဘယ်သူတွေလဲ ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော် ...
Taeyang ဟာ 2001 ခုနှစ်မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Kiss Me Much ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားမှာ ၀င်ရောက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
ထိုစဉ်အခါက သူ့အသက် 13 နှစ်သာရှိပါသေးတယ် ။ သူဟာ အစအနောက်သန်ပြီး ဆိုးတဲ့ကျောင်းသားတစ်ယောက်နေရာကနေ ၀င်ပြီးသရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ ။ လူဆိုးလေးပေါ့နော် ...
Hongki ဟာ အဆိုတော်မဖြစ်လာခင်ထဲက သရုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ အများကြီးရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့်မို့ အဆိုတော်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း လူကြီးခန်းကသရုပ်ဆောင်တဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ကောင်းကောင်းသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တာပါ ။ 2002 ခုနှစ်ကတည်းကစပြီး Magic Card Masuri, There’saLight at the Tip of My Fingernails, Ggangsoon နဲ့ Side Dot စတဲ့ ဇာတ်ကားတွေမှာ ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ် ။
Jinyoung ကလည်း ကလေးသရုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။ Emergency Escape Number 1 ဆိုတဲ့ ပညာပေးအစီအစဉ်မှာ ကလေးသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာပါ ။
4. SF9’s Chanhee
Chanhee ဟာ “Mini TVXQ" ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးထဲက “Little Micky Yoochun” အဖြစ်လူသိများပြီးသားပါ ။
SF9 အဖွဲ့မှာ ပြန်လည်ပါဝင်ပြီး ပွဲဦးမထွက်ခင် Signal, Can You Hear My Heart? နဲ့ The Innocent Man စတဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ဖူးပါတယ် ။
Moonbin ဟာလည်း ငယ်စဉ်က “Mini TVXQ" ဆိုတဲ့ အဖွဲ့လေးထဲက အဖွဲ့သားတစ်ဦးပါပဲ ။ Moonbin ကိုတော့ “Little U-Know Yunho” အဖြစ်သိကြပါတယ် ။
TVXQ ရဲ့ music video “Balloons” မှာ ၀င်ရောက်သရုပ်ဆောင်ဖူးပြီး မြန်မာမှာ F4 လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ Boys Over Flowers ဇာတ်ကားထဲက အိုးလုပ်တဲ့ Kim Bum ရဲ့ ငယ်ဘ၀ character ကိုလည်း သူပဲ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ ။
ကြီးလာတော့ ဘယ်လိုတွေတောင် ခန့်ချောသွားသလဲဆိုတာ ကြည့်ကြည့်ကြပါဦး ...
သူတို့ကတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲက အနုပညာစွမ်းရည်တွေ ပြခဲ့သူတွေမို့ ခုချိန်မှာကျော်ကြားတဲ့သူတွေ ဖြစ်လာတာ မဆန်းတော့ပါဘူး ...
ကိုယ်အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်များပါခဲ့ရင် ပြောသွားကြည့်ပါလားနော် ...